शहरी बक्स speaker वक्ताको विश्लेषण ऊर्जा सिस्टेमबाट ग्याजेट समाचार
शहरी बक्स speaker वक्ताको विश्लेषण ऊर्जा सिस्टेमबाट
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | स्पिकरहरू, समीक्षा
हामी यी दिनहरूको परीक्षण जारी राख्छौं ऊर्जा सिस्टेम फर्मको सब भन्दा उल्लेखनीय समाचार। फेरि हामी संगीत, ब्लुटुथ स्पिकर सम्बन्धित एक उपकरण परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं। यस अवस्थामा यो छ शहरी बक्स।, एक स्पिकर धेरै मूल रेखासँग जुन फरक गर्दछ।
स्पष्ट रूपमा हेर्दै एक युवा श्रोताको लागी, र एक कॉम्प्याक्ट आकार कि यो धेरै पोर्टेबल बनाउँछ, अर्बन बक्स7कहीं पनि तपाइँको संगीत संग जाने आदर्श हो। राम्रो शक्ति, कनेक्टिविटी धेरै विकल्पहरू र एक रोचक मूल्यको साथ यसलाई विचार गर्न एक विकल्प बनाउँदछ।
1 सहरी बक्स…… शक्ति go जानु »
2 बक्स सामग्री
3 बहुमुखी र अनुकूल
4 युवा र साहसी उपस्थिति
4.1 यो शहरी बक्स7हो
5 केही समयको लागि स्वायत्तता
6 उर्जा सिस्टेम शहरी बक्स technical प्राविधिक डेटा पाना
सहरी बक्स…… शक्ति go जानु »
हामीले धेरै फरक स्पिकर-प्रकार ध्वनि उपकरणहरू देख्यौं। हामी आकार, शक्ति, वा डिजाइनको आधारमा भिन्नताहरू बनाउन सक्दछौं। हामी यो पनि देख्छौं कि त्यहाँ केहि वक्ताहरू छन् जुन घरमा संगीतको मजा लिनको लागि डिजाइन गरिएको छ, तिनीहरूको वजन, निर्माण सामग्री वा आकारका कारण।
सहरी बक्स is अधिक छ यस्तो डिजाइन गरिएको हो कि हामी जहाँसुकै पनि हाम्रो मनपर्ने संगीतको मज्जा लिन सक्छौं। सु कम्प्याक्ट आकार यसलाई यातायातका लागि धेरै सजिलो उपकरण बनाउनुहोस्। यसको लागि, ऊर्जा Sistem पनि बोक्ने झोला पनि समावेश छ, एक विवरण धेरै सराहना गरियो। एक वक्ता अब तपाईं २१% छुटमा अमेजनमा किन्न सक्नुहुन्छ
हामी एक "ब्लुटुथ" स्पीकर सुविधा ब्लुटुथ हेर्न चाहन्छौं neither० वटा भन्दा कम न शक्ति। धेरै योग्य उर्जा यदि हामी यसलाई पोर्टेबल हुन डिजाइन गरिएको कम्प्याक्ट स्पिकरहरूको ठूलो संख्यासँग तुलना ग compare्यौं भने। संग सपनाहरु स्पेयर गर्न र घर ब्रान्ड गुणस्तरको शक्ति जसले यसलाई प्रमुख ग्याजेट बनाउँदछ।
द्रुत अनबक्सिंग गर्नाले हामी पाउँदछौं कि शहरी बक्समा एनर्जी बक्सले के समावेश गर्दछ। the. स्पिकरको साथसाथै, हामी एउटा सानो बाकस भेट्टाउँछौं जुन दुई केबलहरू समावेश गर्दछ। A ज्याक केबल ज्याक गर्न ताकि हामी इनपुट पोर्टमा हामीले चाहेको उपकरण जडान गर्न सक्दछौं। र अरु माइक्रो USB केबल जुन ब्याट्री चार्ज गर्न सेवा गर्दछ।
तर हामीले केहि माया गर्‍यौं जुन हामीले मन पराउँथ्यौं। ऊर्जा सिस्टेम यस स्पिकरको साथ समावेश गर्दछ बोक्ने झोला जुन हामी प्रेम गर्दछौं। नरम, नरम कपडाबाट बनाइएको जसले बम्प वा स्क्र्याचहरू बिरूद्ध उपकरणको सुरक्षा गर्दछ। र त्यसले पनि स्पिकर ग्रिलको जस्तो मिल्दो देखा पर्छ। अतिरिक्त जब यो पोर्टेबल स्पिकरमा आउँदछ सबै निर्माताहरूका लागि "" अनिवार्य हुनुपर्छ।
अमेजनमा छुटको साथ अब ऊर्जा सिस्टेम अर्बन बक्स Buy खरीद गर्नुहोस्
बहुमुखी र अनुकूल
शहरी बक्स,, ऊर्जा Sistem द्वारा निर्मित धेरै उपकरणहरू संग, यसको लागि बाहिर खडा छ विभिन्न तरिकामा संगीत बजाउने क्षमता। यस अवस्थामा, तार्किक ब्लुटुथ जडानको अतिरिक्त ब्लूटूथ 4.2 माथि संग १० मिटर दायरा। यो सानो स्पिकर पनि सुविधाहरू माइक्रो एसडी कार्ड स्लट। केहि चीज जुन यसलाई अन्य कुनै पनि उपकरणबाट स्वतन्त्र बनाउँदछ।
पनि छ Mm.mm मीमी ज्याक सहायक इनपुट। हामी केबल मार्फत जडान गर्न सक्दछौं, जुन बाकसमा समावेश छ, कुनै पनि अडियो उपकरण हामी यसबाट जे चाहन्छौं त्यो खेल्नको लागि। जस्तो कि हामी धेरै सम्भावनाहरू देख्छौं ताकि शहरी बक्स7को मजा लिने सम्भावित कुनै पनि तरिकामा सजिलो छ।
तर यदि W० वाट छोटो छ, शहरी बक्स multip गुणा। धन्यवाद सत्य वायरलेस स्टेरियो टेक्नोलोजी जससँग यो गणना गरिएको छ हामी यसलाई अर्को स्पिकरसँग लिंक गर्न सक्दछौं र ती स्टिरियोमा बोल्छन्। एक गुण जसले उसलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी बिरूद्ध पोइन्ट जित्यो। तिनीहरू फर्मको अन्य स्पिकरहरूसँग पनि जोड्न सकिन्छ।
युवा र साहसी उपस्थिति
हामीले पहिले नै छलफल गरिसकेका छौं, अर्बन बक्स clearly स्पष्ट रूपमा युवा श्रोताको लागि लक्षित देखिन्छ। र यो यस्तो छ किनकि यसको आकार, र यसको कोबाल्ट र color्ग अभिप्राय हो। एक बेलनाकार कि एक बोतल को सम्झना दिलाउन सक्छ र उच्च-शक्ति प्लास्टिक सामग्री, यस स्पिकरले हामीलाई जहाँसुकै लिन्छ पनि हामीलाई संगीतको मजा लिनको लागि तयार छ।
हामीले प्राप्त गरेको एकाईसँगaछ कोबाल्ट निलो रंग साँच्चिकै सुन्दर। र यसको शेडहरूले सूर्यको प्रकाशमा ध्यान आकर्षित गर्दछ। यसको आकारको मतलब यो हो कि हामी यसलाई छेउमा वर्णन गर्न सक्दैनौं किनकि हामी सामान्य रूपमा सामान्य रूपमा गर्छौं। तैपनि, यसको आधारमा यसको एक सपाट सतह छ त्यसैले यो टाल्दैन। र हामीसँग पनि छ ठाडो खडा गर्न विकल्प। यस तरीकाले, हामीसँग यसको गोलाकार समोच्च छ ºº०º साउन्ड अविश्वसनीय
यो शहरी बक्स7हो
यदि हामी तेर्सो स्थितिमा राख्छौं भने, माथि रहेको भागमा हामी भौतिक बटनहरू फेला पार्दछौं। केही आधारभूत र सरल नियन्त्रणहरू समावेश गर्दछ Unique अद्वितीय बटनहरू नियन्त्रण को। हामीसँग बटन छ खुल्ला, जुन हामीले स्मार्टफोनसँग लि link्क गर्न थिच्नु पर्छ। एक बटन प्ले / पज गर्नुहोस्, र दुई अन्य बटनहरूका लागि भोल्यूम नियन्त्रण। सरल तर पर्याप्त।
छेउमा हामी एउटा अतिरिक्त फेला पार्छौं जसले शहरी बक्स sound राम्रो बनाउँछ। एक «आधार ट्यूब» बास ध्वनीको तरीकाले यसको मूल्य दायरामा कुनै पनि अन्य स्पिकरले अतुलनीय छ। तिनीहरूले प्रस्ताव गहिराई र धेरै ठूलो उपकरणहरूको लायक ध्वनि क्वालिटी आकार र अधिक महँगो। तपाईंको हुन सक्छ २१% छुटको साथ यहाँ क्लिक गर्दै.
मा तल हामीले एउटा भेट्टायौं कभर गर्नुहोस् कि हामीले हटाउनुपर्नेछ जडान पोर्टहरू पहुँच गर्न। तपाईको ब्याट्री चार्ज गर्न हामीले एउटा फेला पार्‍यौं माइक्रो USB इनपुट। र उनको छेउमा हामीसँग छ माइक्रो एसडी कार्ड स्लट र Mm. mm एमएम ज्याक सहायक इनपुट। हामी यसको कुनै एक पक्षमा स्लिट पनि भेट्छौं जसमा हामी ब्यापपमा झुण्ड्याएर स्पिकर बोक्न डोरी वा हुक घुसाउन सक्छौं।
केही समयको लागि स्वायत्तता
जब हामी पोर्टेबल स्पिकरको बारेमा कुरा गर्छौं, ड्रमको मुद्दा कहिलेकाँहि दुविधा पैदा गर्दछ। एक धेरै ठूलो ब्याट्री को साथ एक उपकरण धेरै ठूलो छ र त्यसैले परिवहन गर्न असहज। तर एक सानो ब्याट्री को साथ, यो पोर्टेबिलिटी मा प्राप्त भने पनि, यो धेरै स्वायत्तता सम्झौता र यो पनि एक समस्या हो। त्यसकारण कम वजन र राम्रो स्वायत्तता बीच सन्तुलन पाउन गाह्रो छ.
ऊर्जा सिस्टेम अर्बन बक्ससँग एक छ 2.000००० mAh ब्याट्री। एक ब्याट्री चार्ज कि एक प्राथमिकता दुरै लाग्न सक्छ यसको6घण्टा सम्म अवधि अवधि। इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा, ब्याट्री जीवन धेरै बारीक छ। अझ बढि स्पिकरमा कि फरक शक्ति स्तर र प्रजननको बिभिन्न प्रकारहरू छन्।
हामीलाई के चाहिन्छ जान्नुपर्दछ अधिकतम ब्याट्री चार्ज स्तरमा पुग्न तीन घण्टा। यद्यपि स्पिकर पनि यो बिल्कुल बिजुली नेटवर्क संग जोडिएको काम गर्दछ। गन्नुहोस प्लेब्याक को hours घण्टा सम्म एक वक्ता मा एक पाउन्ड मात्र तौल यो ठीक छ।
उर्जा सिस्टेम शहरी बक्स technical प्राविधिक डेटा पाना
मोडेल शहरी बक्स।
रंग कोबाल्ट निलो
TWS टेक्नोलोजी SI
ध्वनी प्रणाली 2.0
स्पिकरहरू २ पूर्ण दायरा mm2मिमी
ब्लुटुथ जडान 4.2
अतिरिक्त जडान USB - माइक्रो एसडी स्लट - a.aसहायक जैक
ब्याट्री 2.000 mAh
स्वायत्तता6घण्टा सम्म
उपायहरू 185 x 70 x 70 मिमी
वजन 620 g
मूल्य 62.91 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् ऊर्जा शहरी बक्स।
डिजाइन र रंग
स्वायत्तता hours घण्टा
Hours घण्टा ब्याट्री चार्ज गर्न
धेरै आधारभूत बटन नियन्त्रण
ऊर्जा शहरी बक्स।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » शहरी बक्स speaker वक्ताको विश्लेषण ऊर्जा सिस्टेमबाट
कसरी फेसबुकमा भिडियो अपलोड गर्ने